Maxaa khasaaro ah oo kasoo kordhay weerarkii Al Shabaab ku qaadeen Kismaayo | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Maxaa khasaaro ah oo kasoo kordhay weerarkii Al Shabaab ku qaadeen Kismaayo
Maxaa khasaaro ah oo kasoo kordhay weerarkii Al Shabaab ku qaadeen Kismaayo
Qaraxa ayaa la sheegay in uu ka dhacay qol ka mid ah qolalka guriga wasiirka waxaana ku dhintey saddex askari oo la sheegay in ay ahaayeen ilaalada wasiirka.
Wasiirka deegaanka iyo dalxiisa Jubbaland oo aan waxba ka soo gaarin qaraxan ayaa warbaahinta u sheegay inuu caafimaad qabo oo Alle ka badbaadiyay qaraxa.
Sidda laga soo xigtay wasiirka oo ka gaabsaday fahfaahin badan, laba kamid ah dadka ku naf-waayey falkaas waxay kamid ahaayeen ilaaladiisa, halka marxuumka kale uu kamid ahaa dhalinyarada xaafadda.
Wiilka dhalinyarada ah ee ku dhintay qaraxa iyo askari kamid ah labada ku naf-weyday weerarka ayaa ahaa walaalo, sidda wasiirku qiray, isagoo tacsi tiiraanyo le u diray ehelka iyo asxaabta ay kawada dhinteen.
“Walaahi waxay u muuqataa in ay doonayeen in ay ku dilaan wiilasha ilaaladeyda ah ee qolkaas wada dagneyd,” ayuu ku daray hadalkiisa. “Qolka wuxuu ahaa irid banaan. Waxaana kaliya deganaa ilaaladeyda. Miinada waxaa la saarey daaqada. Burbur yar oo ah meesha miinada ka baxdey ayaa ka dhashay”.
Al shabaab ayaa sheegtay in ay qaraxan ka dambeeyeen hase yeeshee Maamulka Jubbaland ayaa ku dhawaaqay baaritaan la xiriira qaraxa.
Magaaladda Kismaayo ayaa kamid ah meelaha ugu amaanka wanaagsan Koofurta Soomaaliya hase yeeshee mudooyinkii dambe waxa ay martigalisay weeraro iskugu jira qaraxyo iyo toogasho oo ay gaysanayaan xubno ka tirsan Al shabaab.